नेपाल बङ्गलादेश बैङ्क : कम्पनी विश्लेषण (आइतवार, ९ असोज २०७३)
२०७२/७३ आवको चौथो त्रैमासको वित्तीय विवरणअनुसार खुद नाफा ४७ दशमलव २२ प्रतिशत बढेको छ । बैङ्कको सञ्चालक समितिको बैठकले ३२ प्रतिशत बोनस शेयर र १ दशमलव ६८ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
मैनबत्ती विशलेषण : कम्पनीको ४ व्यापार दिनमा टुप्पी र पुच्छर भएको कालो मैनबत्ती बनेको छ । यसले शेयर मूल्यको विषयमा लगानीकर्ताहरू अन्योलमा रहेको देखिन्छ ।
आरएसआई : न्युट्रल जोन (६१ दशमलव ४४ स्केल)मा छ । खरीदविक्री चाप सन्तुलनमा रहेको छ । स्ट्याण्डर्ड डेभिएशन : १४ दशमलव ४४ विन्दुमा छ । उतारचढाव सामान्य रहेको छ ।
मुभिङ एभरेज : २१ दिने औसत मूल्यरेखा र सातदिने औसत मूल्यरेखा एकअर्कासँग टाढिँदै गएका छन् । हालको मूल्य, २१ दिने औसत मूल्य रेखा र सातदिने औसत मूल्यरेखा र ट्रेण्ड लाइनभन्दा तल छ । हालको बिन्दुबाट मूल्य सस्तिएमा रू. १ हजार ६ मा टेवा पाउने र मूल्य महँगिएमा रू. १ हजार १ सय १८ मा प्रतिरोध पाउने सङ्केत देखिन्छ ।
- बैङ्कको चौथो त्रैमासमा नाफा ४७ दशमलव २२ प्रतिशत बढेर रू. १ अर्ब १९ करोड पुगेको छ । खुद ब्याज आम्दानी ३४ प्रतिशत र सञ्चालन नाफा ४८ प्रतिशत बढ्नाले र गत आवमा रहेको रू. ५ करोड ७ लाख खराब कर्जा उठाउन बैङ्क व्यवस्थापन सफल हुनाले खुद नाफा बढेको हो ।
- चुक्तापूँजीको तुलनामा खुद नाफा २६ दशमलव ७८ प्रतिशतबाट बढेर ३९ दशमलव ४३ प्रतिशत पुगेको छ ।
- रू. ३९ अर्ब ८७ करोड कुल निक्षेप सङ्कलन गरी रू. ३२ अर्ब ५२ करोड कर्जा प्रवाह गरेको छ ।
- ब्याज आम्दानी २४ प्रतिशत बढेर रू. २ अर्ब ९१ करोड र ब्याज खर्च १५ दशमलव ४९ प्रतिशत बढेर रू. १ अर्ब ४५ करोड पुगेको छ ।
- कर्मचारी खर्च २१ प्रतिशत र कुल सञ्चालन नाफा ३० दशमलव ३८ प्रतिशत बढेको छ भने अन्य सञ्चालन खर्च ५ दशमलव २१ प्रतिशत घटेको छ ।
- बैङ्कको स्थिर सम्पत्ति १० प्रतिशत र अन्य सम्पत्ति ६ दशमलव ६० प्रतिशत झरेको छ ।
- वैदेशिक मुद्राको विनिमयबाट भएको आम्दानी ३३ प्रतिशत बढेर रू. १४ करोड ६ लाख पुगेको छ ।
- बैङ्कले सम्भावित जोखीमबापतको व्यवस्थामा रकम २१ दशमलव ७८ प्रतिशत घटाएपछि रू. ७ करोड ३ लाखमा सीमित भएको छ ।
- निष्क्रिय कर्जा शून्य दशमलव ७१ प्रतिशत र सीडी रेशियो ७२ दशमलव ५ प्रतिशत रहेको छ ।
- पूँजीकोष लागत करीब ४ प्रतिशत र पूँजीकोष पर्याप्तता ११ प्रतिशत रहेको छ ।
- बैङ्कको चौथो त्रैमासको वित्तीय विवरणअनुसार तरलता अनुपात साढे २९ गुणा, प्रतिशेयर आम्दानी रू. ३९ र मूल्य आम्दानी अनुपात २२ गुणा छ । सो आम्दानी र पछिल्लो समयको शेयरमूल्यको आधारमा निकालिएको पीई रेशियो साढे २९ गुणा छ । हालको शेयरमूल्य नेटवर्थको साढे ५ गुणा छ ।